Ọ dịghị onye na-eche banyere Blog gị! | Martech Zone
Kwa ụbọchị, m na-enwetara ma ọ dịkarịa ala otu mkpesa banyere blọọgụ m. Anaghị m ewe iwe. M na-eche na onwe m, “ọ bụ a blogger ihe, ị ga-aghọta”.
Eziokwu bụ na enwere m nkwanye ùgwù ka ukwuu maka ndị na-ede blọgụ karịa ka m na-eme ndị na-abụghị ndị na-ede blọgụ. (Biko rịba ama na m kwuru nkwanye ùgwù 'ka ukwuu'. Ekwughị m na enweghị m nkwanye ùgwù maka ndị na-abụghị ndị na-ede blọgụ.)
E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya:
Ndị na-ede blọgụ na-ekerịta ihe ọmụma n'efu.
Ndị na-ede blọgụ na-ama echiche dị iche iche aka.
Ndị na-ede blọgụ na-achọ ihe ọmụma.
Ndị na-ede blọgụ nwere obi ike, na-emeghe onwe ha na nkatọ dị ngwa.
Ndị na-ede blọgụ na-ejikọ ndị nọ na mkpa na ndị nwere azịza ya.
Ndị na-ede blọgụ na-agbaso eziokwu.
Ndị na-ede blọgụ na-eche banyere ndị na-ege ha ntị.
Yabụ, ị nwere ike ịchị m ọchị ma chịa ọchị na blọgụ m. Enwere m mmasị n'ịzụ ahịa na teknụzụ m na-ahụkwa ịde blọgụ banyere ihe niile m mụtara. Achọrọ m inweta ihe ọmụma na ịhụnanya na-enweghị atụ mgbe m chọtara ma ọ bụ nyefee obere ihe ọmụma ahụ na-edozi nsogbu nke mmadụ.
M na-echebara ndị na-ahụghị ọrụ ha n’anya. Ozugbo 5PM kụrụ, ndị folks na-ege ntị, gbanyụọ ma laa n'ụlọ. Worldwa na-agbanwe gburugburu ha, asọmpi na-achọta, a na-emeghe teknụzụ ọhụụ nye ụwa mana ha enweghị mmasị. Ha na-ala be ka ha na-egwu ala n’ime ala, mmadụ ewere obere shọvel ha. Kedu otu ị ga-esi gbanyụọ ọchịchọ ịmata ihe na ihe okike dị ka ọkụ ọkụ?
Njikwa, onye ndu, mmepe, eserese, njiri mara onye ọrụ, ojiji, ahịa - ihe ndị a niile bụ ọrụ chọrọ mmụta iji wulite ihe ịga nke ọma. Y’oburu n’inweghi obi uto banyere oru aka gi ma obu n’ulo oru gi, i nweghi oru - i nwere oru. Achoghi m iso ndi nwere oru aru oru. Achọrọ m iso ndị chọrọ ịgbanwe ụwa rụọ ọrụ.
Achọpụtara m na ndị ndu hụrụ ndu n’anya n’edu ha na Nzukọ ha, n’ụlọ ha na ezi na ụlọ ha. Ndị mmepe hụrụ ọrụ aka ha n’anya na-emepụta azịza n’oge oge ha. Ndị na-ese ihe osise na-ewu ebe nrụọrụ weebụ mara mma ma na-arụ ọrụ na-enweghị onwe ha. Ndị na-emepụta ihu na ngwa ọrụ na-anwale ngwa na ịgụ akwụkwọ ndị kachasị ọhụrụ. Ndi okacha amara n’aru ndi n’acho ihe na achota ihe nile ha n’achoputa. Ndị ahịa na-enyere ndị enyi ha aka mgbe niile n’achụmnta ego ha. Ọ bụghị ọrụ ọ bụla maka ndị a, ọ bụ ịhụnanya na ndụ ha.
Nke a apụtaghị na ọ na-ewepụ ezinụlọ ma ọ bụ obi ụtọ. Ndị a nwere ihe niile ha chọrọ ma ha na-enwe obi ụtọ na ndụ ha. Ka m na-agụ blọọgụ, enwere m ike ịhụ agụụ nke ndị na-ede blọgụ ndị a na-etinye n'ọrụ ha ma ana m asọpụrụ ha. Enwere m ike ghara ikwenye! Ma, m na-asọpụrụ ha.
Taa m natara ederede site na Mark Cuban na nzaghachi nye okwu m tinyere na blọọgụ ya. Ọ dị nkenke - mkparịta ụka siri ike na nkọwa m kwuru na saịtị ya. Akpọrọ m gị n'anya hụrụ nwoke a n'anya, mana enweghị m ike wepụ anya ya na post ya. Ọ bụ onye na-eme ihe ike, na-ekwukarị okwu, ọ ga-abụkwa na anaghị m ekwenye n'ihe ọ bụla ọ na-ekwu. Ma m hụrụ ya n'anya ahuhu na m na-eche na ọ ga-abụ ịrịba na-arụ ọrụ na onye dị otú ahụ.
Ọ dị mma, nkà ihe ọmụma zuru ezu… ka anyị kwụsị nke a na ndetu obi ụtọ. Ọ bụrụ na m ga-eke uwe elu, nke a bụ ihe ọ ga - adị ka:
Tags: ndị na-ede blọgụịde blọgụọ dịghị onye na-echeọ dịghị onye na-eche banyere blog gị
Blog Companylọ Ọrụ Gị Ọ Ga-abụ na Ndụ Gị dabere na Ya?
Kwuru nke ọma. Anọ m n'etiti ịnakọta ngwa maka oghere ọrụ ma achọpụta na otu n'ime ajụjụ 1st m na-ajụ bụ, "onye a ọ nwere blog ma ọ bụ weebụsaịtị?" Ndị na-eme ma na-egosi ụdị agụụ maka ihe ha na-eme na-eguzo karịa ndị na-enweghị ọnụnọ weebụ ọ bụla.
Ma mgbe ahụ, m na-ele mmadụ anya n'ihu 🙂
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị agaghị aghọta, ọ ga-abụ ihe ọchị ma ọ bụrụ na uwe elu ahụ kwuru, sị: - Akara Akara ebe a- + Blog! = Enyi. 🙂
Ọ dị mma, Stephen!
Ryan Warren kwuru
Doug, M na-eche banyere blog gị.
Akwa post. Enweghị m ike ikwenye karịa n'ihe niile ị kwuru. Ugbu a ọ dị m mkpa ịkwụsị “ọrụ” m.
M na-echekwa banyere blọọgụ gị, Doug.
Oge ụfọdụ ndị dị ka ndị nwere ọgụgụ isi na ndị nwere mmụọ ọzọ anaghị enweta ịde blọgụ. Naanị m na-echere ka ha hụ ìhè.
Daalụ maka agbamume ụmụ okorobịa! Ahụrụ m blọọgụ gị n'anya!
Enwere m olileanya na ị ga-eji uwe gị mee uwe elu (ị nwere ike iji cafepress ma ọ bụ mpempe akwụkwọ.).
Ma mgbe ị nọ ya, biko nwekwa ụdị enyi nwoke ahụ!
All m nwere ike ikwu bụ na ọ dị ọcha ọgụgụ isi!
Onye na-ede blọgụ oge na-adịghị anya, na-ebugharị ọdịnaya niile n'ime wordpress…
Nnukwu ugwu 2 u. M na-agụ b blog, ọ bụ ezie na .. :-)
Doug, abum onye ohuru na blog uwa, ma achotala m nke jikoro ya na imeko ihe na obere oge o juru m anya.
Nnukwu ihe banyere agụụ.
Daalụ maka ikwu ma nabata na blogosphere! Ọ bụ teknụzụ dị egwu, na-agbanwe agbanwe. Enweghị m ike ịhụ ebe ọ na-ewe anyị.